८ आश्विन २०७७ बिहीबार Thursday, September 24, 2020
KATHMANDUTemperature 19°CAir Quality9
रेमिट्यान्सको हिसाब राख्‍ने सरकारले आफ्‍नै नागरिकहरूलाई फरक चस्माले हेर्‍यो । राष्ट्रपतिले समेत अमेरिका बस्‍ने नेपालीलाई सचेत रहन अनुरोध गर्नुभयो तर खाडीलगायत मुलुकमा रहेका नेपालीले आश्वासन पनि पाएनन् ।
२४ चैत्र २०७६ सोमबार
जुनसुकै किसिमको विपद्, महामारी, दैवीप्रकोप कसैको वशको कुरा होइन । दु:खमा परेका बेला विदेशका रहेका नेपालीहरूले कुनचाहिँ विपद्‍मा हातेमालो गरेका छैनन्– भूकम्प आउँदा होस् अथवा आँधीबेहरीले तराई डुबाउँदा, पहिरोले पहाड बगाउँदा । सरकारभन्दा पहिला देश संकटमा फस्यो भन्दै हारगुहार गर्ने ती नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका छन् ।
हामी सोच्‍ने गर्थ्यौं, सरकार भनेको हाम्रो असल अभिभावक हो । तर यस पटक सरकारले विदेशमा रहेका आम मानिसलाई जुन व्यवहार गर्‍यो, हाम्रो सोच विपरीत देखियो ।
दु:खमा सम्झिने सरकारले यसपालि नागरिकलाई यस्तो पर्दा चासो गरेन । सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई समेत फर्काउने चेस्टा गर्‍यो । देशको माटोमा टेक्न महाकालीमा हाम फाल्नुपर्ने बाध्यता बनायो । उल्टै विदेशबाट आउनेले कोरोना ल्यायो भनेर भ्रम फैलाई घर फर्किएकाहरूको अपमान गर्‍यो ।
यो त केटाकेटीले पनि अन्दाज गर्न सक्ने विषय थियो । सुरुआतमै संयमता अपनाएको भए क्‍वारेनटाइनको व्यवस्था गर्नतिर लागेको भए आरोप–प्रत्यारोप केही लगाउनुपर्ने थिएन । नागरिक र सञ्‍चार माध्यमले पटक–पटक झक्झकाइरहँदा पनि त्यसबेला सरकार विशेषत: स्वास्थ्यमन्त्री पाहुनाको हेरविचारमा लागे ।
आम नागरिकले भनेको नसुन्‍ने/नटेर्ने देखियो । सरकारलाई आकाशवाणी भएर अब अनिष्ट हुँदै छ नभनेसम्म तयारीमा नजुट्ने देखियो । जुन रूपमा पछिल्लो समय सरकारले सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गर्‍यो, त्यो भानुभक्त ढकालको घरमा पाहुना आएको बेला यो किसिमको तयारी भएको भए कोरोनाबाट यतिविघ्‍न डर–त्रास हुने थिएन ।
युएईबाट साथीले फोन गर्‍यो, ‘नेपाल फर्किन तयार थिएँ । लकडाउन भयो । भिसा सकियो ।’ ‘धैर्य गर, केही समय,’ मैले सम्झाएँ । ऊ नराम्रोसँग भक्कानियो । हामी सरकारले जस्तो किसिमको मापदण्ड बनाए पनि हामी त्यो गर्न तयार थियौँ । किन यस्तो किसिमको व्यवहार गर्‍यो ।
अमेरिकामा कागजपत्रविहीन आप्रवासीको संख्या झन्डै १ करोड २० लाखसम्म भएको तथ्यांक छ । धेरैजसोले रोजगारी गुमाएका छन् भने अरूको पनि काम गर्ने अवधि काटिँदै गएको छ
भारतको सीमामा अलपत्र परेका नागरिकको अझै उद्धार हुन सकेन । अन्य देशका नागरिकलाई त्यस्तो विपद् परे तुरुन्तै उद्धार गरिन्छ । हाम्रो सरकार म विपद्‌मा परेँ भनेर आर्तनाद गर्दासमेत किन न्यूनतम मानवीयताको ख्याल गर्दैन ?
मलेसियामा पनि भिसा सकिएर घर फर्किन तयार भएर बसेका नेपालीहरू हामीसँगै होस्टलको क्‍वारेनटाइनमा छन् । उनीहरूलाई कुनै किसिमको दु:ख छैन । कम्पनीले बुझेको छ । तर सबै कम्पनी हाम्रोजस्तै बुझ्‍ने हुँदैनन् । पासपोर्ट हातमा थमाइदिएपछि गलहत्याउने कम्पनीहरू पनि हुन्छन् । युएई तथा कुवेतमा रहेका र भारतीय सीमामा आइपुगेका नेपाली पीडामा परेका हुन् । आफ्‍ना नागरिकलाई रुवाएर हाँस्‍न सक्ने संसारकै कठोर मनोभाव देखेँ, मैले ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि सम्झिनु भएछ, अमेरिका बस्‍ने नेपालीलाई । अन्य राष्ट्रमा नेपाली छन् भन्‍ने कुरा पनि उहाँले भुल्नुभयो कि ? आफन्त, नातेदार अमेरिकामा भएर पो सम्झिनुभएको हो कि महामहिम राष्ट्रपतिले । होइन भने इटाली, स्पेन, जर्मनलगायत युरोपका अधिकांश मुलुकमा नेपाली छन् ।
सबैभन्दा कोरोनाग्रस्त क्षेत्र इटाली हो तर राष्ट्रपतिले इटाली छाडेर अमेरिका सम्झिन पुग्‍नुभयो । खाडीका रहेका नेपाली त झन् नेपाली नै होइनन् जस्तो किसिमको व्यवहार देखियो ।
कुनै न कुनै रूपमा पर्यटन उद्योग सम्बद्ध क्षेत्रमा कार्ययरत नेपालीहरूको रोजगारी संकटमा छ ।
राज्यबाट यस्तो किसिमको व्यवहारको अपेक्षा कुनै पनि नेपालीले राख्दैनन् र यो विपद् घडीमा सरकारले केसम्‍म गर्न सक्छ भन्‍ने अपेक्षा अवश्य गरिरहेका हुन्छन् ।
पक्कै पनि विदेशको क्‍वारेन्टाइन सजिलो छैन तर हामीले सरकार हामीलाई उद्धार गर भनेर रोइ–कराई गरेका छैनौँ । जो विपद्‌मा परेका छन्, जो अलपत्र स्थितिमा छन्, तिनको उद्धार गर । त्यसपछि मापदण्डअनुसार कति दिन कता राख्‍ने, राख भनेका हौँ ।
मलेसिया लकडाउनको २४ चैत १९ औँ दिन भयो । सुरुआतमा मलेसियाले दुई साताका लागि बन्द घोषणा गरेको थियो । मार्च १८ देखि मार्च ३१ सम्म बन्द घोषणा गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि फेरि दुई साता थपियो । अप्रिल १४ सम्मका लागि मलेसिया सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको छ । मलेसियामा एक–दुई जनामा देखिनेबित्तिकै बन्द गरिएको थियो । तर, संक्रमितको संख्या कम छैन । हालसम्म ३ हजार ६ सयभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ६१ ।
लकडाउन कमजोर छैन । बाहिर हिँडेको देखे, यहाँको सरकारको नियमलाई उल्लंघन गरे तीन महिना जेल र १ हजार जरिवाना भनी सूचना जारी गरिएको छ । अवश्य पनि सरकारको नीति–नियमलाई सबैले पालना गरेका छन् । होस्टलको गेटबाट बाहिर निस्किन दिइएको छैन ।
भित्रको भित्र बस्‍नू भनी कम्पनीले पनि सम्झाइरहेको छ । यसरी भित्रको भित्र हुँदा पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने नेपालले खुलम खुला हिँड्न दिए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । घरभित्रको भित्र बसेको १९ दिन भयो । दिनरात उस्तै लाग्‍न थालेको छ । पट्यारलाग्दो दिन भएको छ । र, पनि नियमलाई मान्‍नैपर्‍यो । यदि उल्लंघन गरे सीधै प्रहरीले लगेर चिसो भुइँमा राखिदिन्छ– त्यो पनि तीन महिना । नियमलाई कडाइ गरेपछि पालना हुँदो रहेछ त ।
विदेशको लफडामा परेर महिना दिन कस्टडीमा बसेर आएको साथीले उसले भोगेको दिनको व्यथा सुनायो । खान पनि दिँदैन, सुत्‍ने ठाउँ पनि हुँदैन । उसले हामीले प्रयोग गर्ने बाथरुम देखाउँदै भन्यो, ‘यति ठूलो ठाउँमा त २० जना मानिस अट्छन्, यति सफा भइदिए । एउटा कुराचाहिँ विदेशका बाथरुम, ट्‍वाइलेट सफा हुन्छन् ।’ उसले त्यति भनेपछि मन आत्तिन छाड्यो । नत्र महिना दिन कसरी कटाउने, छटपटी भएको थियो । जब छटपटी लाग्छ, म साथीले महिना दिन कस्टडीमा भोगेको दिन सम्झिन्छु र क्‍वारेन्टाइन बसाइ अलि सहज ठान्छु ।
भित्रको भित्र भएपछि कुनै योजना छैन । एक–दुइटा किताब नभएका हैनन् तर ती सब पढिसकेका छन् । अब फिल्म, युट्युब यस्तै हेरेर दिन बितिरहेको छ । बेलुका सुत्‍नुअघि बिहान ड्युटीको पीर हुन्थ्यो । झुपुक्क निद्रा आउँथ्यो । तर अहिले बेलुका सुतेपछि बिहान उठेर आराम गर्नेबाहेक अरू काम छैन । सुतेर दिन बिताउन काम गरेभन्दा भयंकर चर्को भएको छ ।
चीनको वुहानबाट फैलिएको महामारी कोभिड–१९ अहिले विश्वभर फैलिरहेको मात्र हैन, विकसित मुलुकको पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । शक्तिशाली देशहरूको दम्भ, अहंकार कोरोनाले तोडिदियो । आशा छ, कोरोना कहर सकिएपछि विभिन्‍न शक्तिशाली देशहरूबीचको दूरी अझ निकट हुनेछ, भाइचारा कायम रहनेछ ।
यतिबेला मान्छेहरू सबथोक भुलेर आफ्नो स्वास्थ्यको कामना गरिरहेका छन् । मानव जातिलाई मानवीयता सिकाइदियो । आफूलाई रत्तिभर परिवर्तन गर्न नचाहनेहरूलाई परिवर्तन गरिदियो । कोरोनाले मानिसको दैनिकी उल्टाइदियो । काम गर्ने, खाने, सुत्‍ने, उठ्ने, भेटघाट गर्ने सबै परिवर्तन गरिदियो । स्वतन्त्र मानिसलाई पिँजडाको सुगा बनाइदियो । कोरोना एकाएक कति शक्तिशाली महामारी बन्यो ! संसार हल्लाएर छाड्यो ।
निडर मानव जातिलाई के प्रलय हुन लाग्यो भनेर सोच्‍न बाध्य बनायो । तर्साएको मात्र छैन, ज्यान पनि लिइसक्यो । सिक्नैपर्ने कुरा– आत्तिन पनि नहुने, मात्तिन पनि नहुने । रुन पनि नपाइने, हाँस्‍न पनि नपाइने स्थिति सिर्जित भयो । कोरोनापछिको दिनचर्या फेरियो । कुनै पनि हालतमा परिवर्तन गर्न नसकिने दैनिकी ठाउँको ठाउँ परिवर्तन गरिदियो । समयमा उठ्ने, सुत्‍ने काम गर्ने, खाने, आराम गर्ने सबै बर्बाद गरिदियो । लकडाउनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ । कसैले उल्लंघन गरेका छैनन् । यसबाट सबैले पाठ सिक्नुपर्छ ।
१९ दिनदेखि बिहान अलार्म बज्‍न छाडेको छ । त्योभन्दा अगाडि हरेक बिहान जीवन अलार्ममा समर्पित थियो । त्यति मात्र हैन, कुन दिन, के बार सबै भुलाइदिएको छ । समय तालिका फेरिदिएको छ । स्वतन्त्र जीवनलाई एउटा कोठाभित्र थुनिदिएको छ । जीवन बहुत सकस र पट्यारलाग्दो भएको छ । तर मानिसले सिक्नुपर्ने ज्ञान यही रहेछ । हामीजस्ता सभ्यता भएका तर धैर्य नभएकाहरूलाई कोरोनाले पाठ सिकायो ।
रफ्तारमा चल्ने सेकेन्ड सुईजस्तो जिन्दगी लकडाउन भएयता बहुत सुस्त र अल्छी भएको छ । घन्टा सुईजस्तो घिस्रिँदै चल्न थालेको छ ।
कोरोनाले पूरै समय तालिका बदलियो । आजकल टेबलको अर्लाम बज्दैन । बिहान कहिल्यै चुलो बल्दैनथ्यो । हामी बिहानको खान सधैँ कम्पनीको क्यान्टिनमा खान्थ्यौँ । १९ दिनयता चुलो खाली हुँदैन ।
पहिलेजस्तो खानेकुरामा स्वाद छैन– खै के नपुगेजस्तो खल्लो लाग्छ । पहिलेजस्तो विभिन्‍न परिकारका तरकारी पाक्न छाडेको निकै दिन भयो । लकडाउनको हल्ला सुनेको पहिलो दिन दुई–तीन घन्टा लाइन बसेर लिएको तरकारीका परिकार साता दिन टिकेन । तर हामी अझै खानामा त्यति लोभ गरिरहेका छैनौँ । दाल–भात खाएर पनि चल्ने रहेछ, जुन कुरा केही दिनयता प्रमाणित हुँदै छ ।
पोख्‍नैपर्ने दु:खचाहिँ रोग र भोकको भन्दा अर्कै छ । जसरी अस्ट्रेलियाका विद्यार्थीहरूले खान/ बस्‍न पाएनन् भनेर कोलाहल गरिरहेका छन्, त्यहाँका केही साथीले त्यतिविघ्‍न खानै नपाउने स्थिति भएको छैन । त्यो हल्ला बढी भनिरहेका छन् । जेहोस्, आफ्‍ना नागरिकले दु:ख पाएको खण्डमा सरकारले तिनलाई हामी छौँ, सरकार छ भन्‍ने ढाडसचाहिँ दिनुपर्छ ।
खाडीमा खान नपाउनेहरू त कोरोना आउनु अघिदेखि नै थिए । जति खाडीका श्रमिकलाई युरोप, अमेरिका, नेपालमा बस्‍ने केही–केहीले खुब निन्दा गर्छन्, मानिस नै हैनजस्तो व्यवहार गर्छन् । यसपालि झन्डै राष्ट्रपतिबाट पनि उस्तै किसिमको भनाइ आयो । यसले चाहिँ खाडीमा रहेका तमाम मनहरूमा चोट लाग्यो । देशको सर्वाेच्च पदमा रहने, सरकारको कुनै पनि अंगको नेतृत्व गर्नेले भेदभाव गर्नु हुँदैन । सुरुआतमा चीनको वुहानबाट नेपाल सरकारले जसरी आफ्‍ना नागरिक ल्यायो, उसैगरी सान्त्वना दिनुपर्थ्यो । सरकारले भनुँ अथवा कुनै सम्मानित पदमा रहनेहरूले यसपालि भेदभाव गरे । नागरिकलाई धैर्यको साथ बस्‍नू भनी ढाडस दिन सकेनन् ।
रेमिट्यान्सको हिसाब राख्‍ने सरकारले नागरिकलाई समान दृष्टिकोणले हेरेन, फरक चस्माले हेर्‍यो । हैन भने चीनभन्दा इटाली, स्पेन र अन्य युरोपेली राष्ट्रको स्थिति भयावह छ । राष्ट्रपतिले अमेरिका बस्‍ने नेपालीलाई सचेत रहन अनुरोध गर्नुभयो तर खाडीलगायत इटाली, स्पेन, जर्मनका नेपालीचाहिँ नेपाली हैनन् र ? मनको बह पोखे यसको उत्तर कसैले दिने छैनन् । अन्तमा के भान भयो भने देशको सरकारले कुनै पनि विपद् परे उद्धार गर्न कोसिस पनि नगर्ने रहेछ भन्‍ने भयो । नत्र विश्वभर रहेका नेपालीलाई सम्झिनुपर्थ्यो ।
सीमामा आएर कति आर्तनाद गरिरहे । कोलाहल मच्चियो । नाकाबाट छिर्न दिईएन । आफ्नो देशबाट अपमानित हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना !
कुनै पनि देशमा नेपाली पुग्‍नु भनेको चर्न गएको गोठको गाईजस्तो हो । अझ भनुँ गुँडमा बचेरा राखेर आहारा खोज्‍न गएको जुरेली चरीजस्तै हो । आहार लिएर ऊ अवश्य गुँडमा फर्किन्छ ।
यहाँ के देखियो भने गोठबाट छाडेको गाई अब फर्की आउँदैन भनेर गोठ नै भत्काइदिने चेस्टा भयो । कमसेकम यतिबेला विश्वभर रहेका नेपाली त्रासमा छन्, को मर्ने, को बाँच्‍ने । त्यो अलगै कुरा हो ।
यतिबेला सरकारको तर्फबाट आश्वासन मात्र पाए पनि ठूलो शक्ति प्राप्त हुन्छ । सरकारले संकटकालीन अवस्थामा हाम्रा नागरिकलाई स्थिति हेरेर फर्काउन सक्छौँ भन्‍ने प्रण पनि गर्न सकेन । बरु उल्टै विदेशबाट आउनेहरूलाई गरिएको व्यवहारले त्यहाँ रहेका आम नेपालीको मन अवश्य दु:खेको छ ।
विपद्‌को बेलामा नागरिकले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ । विदेशबाट आउनेले पनि भाग्‍नु हुँदैन । जे–जस्तो सरकारको मापदण्ड छ, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । तर हेर्ने दृष्टिकोण विदेशबाट आउने नेपालीलाई नै कोरोना भाइरसजस्तो व्यवहार गरेपछि मानिसले रोग ल्याए पनि कसरी व्यक्त गर्न सक्छ ?
नेपाल सरकारलाई यो लेखमार्फत अनुरोध गरेँ– मान्छेहरू आत्तिएका छन् । तुरुन्तै झिकाउन सक्ने सामर्थ्य नभए पनि सरकार कुनै विपद्‌को घडीमा आफ्‍ना नागरिकलाई उद्धार गर्न तयार छ भन्‍नुपर्छ नि ।
गैरजिम्मेवार भएर जो जहाँ छ, त्यही बस्‍ने भनेर उम्किन पाइन्छ ? न्यूनतम मानवीयताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई मापदण्डअनुरूप कति दिन क्‍वारेनटाइनमा राख्‍ने हो ? राज्यले अभिभावको भूमिका वहन गर्नुपर्छ ।
मान्छेहरू भिसा सकिएर अलपत्र परेका छन् । विभिन्‍न देशका दूतावासमार्फत समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । सत्य कुरा यही हो– दु:ख परेका बेला हर कोहीले आमा सम्झिन्छ । देश भनेको आमा हुन् । त्यसैले यो विपद्‌को घडीमा कसैले पनि कटु शब्द प्रयोग नगरौँ, दु:ख–सुख कोरोनासँग सामना गरौँ ।
विदेशमा रहेकाले कोरोना ल्यायो भनेर आरोप–प्रत्यारोप बन्द गरौँ । विदेशबाट आएकाहरूका लागि के कसरी तिनलाई सुरक्षित स्थानमा राख्‍ने, यो विषयमा सरकार अनभिज्ञ थिएन । त्यतिबेला सतर्क भइदिएको भए नेपालमा डर–त्रास हुने थिएन ।
मनमा अनेक कुरा खेल्छन् । आफ्नो मात्र होइन, देशको चिन्ता लाग्छ । माथि भनेझैँ हामीले हाम्रा परिवार छाडेर यहाँ आहार लिन आएका हौँ । हामी अवश्य आफ्नो गुँडमा फर्किन्छौँ । परिवारको पीरचिन्ताले सताउँछ ।
अन्तमा, देश/विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपालीको तर्फबाट सरकारलाई सम्झिन चाहन्छु । सरकारलाई त फुर्सद नहोला यतिबेला । तर सुझाव दिन चाहन्छु– सरकार र गैरसरकार, जो विपद्‌को घडीमा पनि मानिसलाई अझ चोट दिने काम गर्छन्, यसबेला पहुँच र शक्तिको आधारमा हैन, मानवीयताको आधारमा व्यवहार गरिनुपर्छ । युरोप, अमेरिका, कुनै एक देशको नेपालीलाई हैन, विश्वभर रहेका नेपालीलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ ।